1- Vokany sasantsasany
« Andriamanitra tsy azo vazivazina, fa izay afafin’ny olona no hojinjany » (Galatiana 6 : 7).
Fehezin’ny Baiboly amin’ny teny tokana ny vokatry ny fahamamoana : « fanaranam-po amin’ny ratsy » (Efesiana 5 : 18). Ny fanaranam-po amin’ny ratsy dia toetra mitory fivahavahana sy fahasimban’ny fahamendrehan’ny maha-olona ; tsy manana intsony ilay fahamendrehana maha-zavaboahary manan-tsaina natao hifandray amin’Andriamanitra azy izy.Tsy afaka manatontosa ny andraikiny amin’Andriamanitra, ny namany, ny fianakaviany ary eo amin’ny asany intsony izy. Tsy manana hery sy tanja-tsaina ilaina ho-enti-miady amin’ny fironana amin’ny ratsy sy ny toetra ratsy intsony izy, hany ka mitombo mora foana ireny satria tsy ao intsony ilay hery fiarovana nomen’Andriamanitra ny olona. Dia manjary kilalaon’ny devoly ilay olona !
2- Ny Kristiana sy ny toaka
3- Inona no ambaran’ny tenin’Andriamanitra momba izany ?
« Aza mijery ny divay noho ny hamenany sy ny fanganohanony eo anaty gilasy ary ny fikoriany mahafinaritra ; fa amin’ny farany dia hanaikitra toy ny bibilava izy ary hanindrona toy ny menarana. Koa ny masonao dia hijery vehivavy jejo (mpivaro-tena), ary ny fonao hieritreri-dratsy. Eny, ho sahala amin’izay mandry ao amin’ny ranomasina ianao, sady ho tahaka izay mandry eo an-tendron’ny andrin-tsambo…Nokapohiny aho, hoy ianao, fa tsy reko naharary ahy, nandalasiny aho, fa tsy tsaroako ; rahoviana ange aho no hifoha mba hitadiavako azy indray ? » (Ohabolana 23 : 31-35)
« Lozan’izay mifoha maraina koa ka mitady toaka ! Izay miboboka mandra-paharivan’ny andro ka ampirehetin’ny divay ! » (Isaia 5 : 11)
« Mpaniratsira ny divay ary mpitabataba ny toaka, koa izay miraikiraiky azon’izany dia tsy hendry » (Ohabolana 20 : 1)
« Fijangajangana sy divay ary ranom-boaloboka no mahalasa ny saina » (Hosea 4 : 11)
4- Ahona no hahafahana amin’izany fanandevozana izany ?
Omen’ny Tenin’Andriamanitra ao amin’ny epistily voalohany nosoratan’i Jaona, toko 1, andininy faha-9, ny valiny : « Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsy fahamarinana rehetra ». Rehefa avy niaiky toy izany ianao, dia apetraho eo amin’Ilay mampitoetra anao ao amin’ny fahafahan’ny zanak’Andriamanitra noho ny asa nataony ny fitokisanao, dia Izy no mangataka tsy mitsahatra ho anao. Hoy i Paoly apostoly : « Mahay ny zavatra rehetra aho ao amin’Ilay mampahery ahy » (Filipiana 4 : 13). Moa tsy zavatra mety ho marina aminao ve izany fahatsapana izany ? Te-hanafaka anao Andriamanitra ; nefa takiny, toy ny tamin’ny andro vao niovanao fo, ny finoana sy ny fankatoavana.
5- Ny làlan’ny fankatoavana
Tsy izy mihitsy ny fanapahan-kevitra tapany fotsiny : « Aza mijery ny divay » (Ohabolana 23 : 31). Ario lavitra tanteraka anao mihitsy izany, mba tsy ho hitanao intsony. Mety ho mafy aminao izany, nefa ny hery sy ny fitahian’ny Tompo dia ao amin’izany fankatoavana izany. Marina fa manameloka tanteraka ny fimamoana ny Baiboly, nefa kosa tsy mandrara ny fisotroana divay kely izy. I Paoly aza dia nanoro hevitra an’i Timoty mba hisotro divay kely handevonan-kanina tsara (I Timoty 5 : 23). Nefa kosa, raha be loatra ny zava-pisotro misy alikaoly nosotroinao, ka manomboka mahatsiaro hamamoana ianao, dia tsy fisotroana amin’ny antonony sy tsindraindray intsony izany. Tsy maintsy hentitra ianao, mijery ny lazain’ny Tenin’Andriamanitra amintsika momba ny loza mitatao entin’ny divay sy ny alikaola, ka hifady izany tanteraka. « Aza mijery ny divay ! » Tsy afaka ny hiantehitra amin’ny herin’ny Tompo hanafaka anao ianao, nefa tsy handeha amin’ny làlan’ny fankatoavana.
« Mandosira ny fijangajangana » (I Korintiana 6 : 18)
« Mandosira ny fanompoan-tsampy » (I Korintiana 10 : 14)
« Fa ianao kosa, ry lehilahin’Andriamanitra, mandosira izany zavatra izany » (I Timoty 6 : 11)
« Fa mandosira ny filàn’ny tanora fanahy » (II Timoty 2 : 22)
Tsy milaza izy hoe tohero fa andosiro ny zavatra hankahalaina. « Mankahalà ny ratsy » (Romana 12 : 9). Tsy maintsy andosirana ny fisotroana, toy ny handosirana bibilava. Tsy atao kilalao ny bibilava. Tsy hoe tsy miraharaha ianao raha mandalo eo akaikiny, tsy handray azy ianao, na dia hoe hanala azy tsy hanakan-dàlana anao aza, tsy hibanjina azy ianao, satria mahafaty ny kaikiny. Tsy maintsy lavina izay mety ho fanasana anao hisotro, ary indrindra indrindra, tsy tokony hanasa ny sasany hisotro ianao. Tsy tokony hitahiry divay koa ao an-trano, ary tsy tokony hanamboatra. Raha sendra misy vahiny – satria moa Andriamanitra mamporisika antsika hazoto handray vahiny- dia mora kokoa ny mandroso zava-pisotro tsy misy alikaola toy izay divay na labiera.
6- Misy fanandevozana hafa mananontanona ny kristiana koa : ny sigara, ny zava-mahadomelina…
« Dia hoy Jesoa tamin’ny Jiosy izay nino Azy : Raha maharitra amin’ny teniko ianareo, dia ho mpianatro tokoa, ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hahafaka anareo tsy ho andevo… Izay rehetra manota dia andevon’ny ota…Koa raha ny Zanaka no hahafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo » (Jaona 8 : 31-36). Ny fitiavana hanao ny sitrapon’Andriamanitra, na dia toa manohitra tanteraka izay tsapa sy tiana aza izany, dia mamoha ny varavarana hidiran’Ilay te-hanafaka ireo izay miantso vonjy aminy, amin-kery.
Famaranana : Fanapahan-kevitry ny fo
Ry kristiana, aoka isika ho mailo kokoa sy ho vonona kokoa mba handeha ho voninahitr’i Kristy Izay efa tia antsika hatramin’ny fahafatesana ary efa niaritra ny hazo fijaliana mba hanaisotra ny fahotantsika. Tiany isika mba ho toy ny efa maty ny amin’ny ota « mba tsy handaniantsika ny andro sisa iainantsika amin’ny nofo araka ny filàn’ny olona intsony, fa araka ny sitrapon’Andriamanitra » (I Petera 4 : 1-2).
Titre : Ny Baiboly sy ny toaka
« Aza mijery ny divay noho ny hamenany sy ny fanganohanony eo anaty gilasy, ary ny fikoriany mahafinaritra ; fa amin’ny farany, dia hanaikitra toy ny bibilava izy ary hanindrona toy ny menarana »
Ohabolana 23 : 31-32
Dos Bokikely hafa amin’ny teny malagasy :
- Ianao koa, tia anao Jesoa !
- Alimanaka ara-pilazantsara « Ilay voa tsara nafafy »